Yurub (Af Ingiriis : Europe; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa qaarada ugu xigta dhinaca galbeed ee arliga weyn ee la isku yidhaahdo "Eurasia" kaasi oo ka kooban qaarada Aasiya iyo Yurub. Qaarada Yurub waxaa dhinaca waqooyi ka dhaca Bada Arktik, dhinaca galbeedka waxaa ka xiga Badweynta Atlaantik, dhinaca koonfureed waxaa ka dhaca Bada Mediterraniyan. Si kastaba ha ahaatee, dhinaca bari iyo koonfurbari qaarada Yurub waxaa inta ugu badan loo yaqaanaa Xadka Qaaradaha; taasi oo laga wado meesha qeybisa qaarada Aasiya iyo Yurub. Sida caadiga ah labada qaaradood ee Aasiya iyo Yurub waa kuwo isku-xidhan deegaan ahaan; waxaana badhtanka u dhaca wadano dhowr ah oo ka mid tahay wadanka Turkiga oo labada qaaradoodba ka tirsan.
Turkiga (Af-Turki: Türkiye; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyada Turkiga, waa wadan aad u balaadhan waxa uu ku kala yaala labad qaaradood ee Aasiya iyo Yurub wadanka
Turkigu waxa uu xuduud la leeyhay Joorjiya, Iran, Armiiniya, Azrabijan dhinaca bari dhinaca koonfur waxa uu xuduud kala leeyahay dalalka, Ciraaq Suuriya iyo bada dhexe dhinaca galbeed waxaa ka xiga wadan giriiga iyo wadanka Bulgaariya iyo bada loo yaqaano eeje, dhina waqooyi waxaa ka xiga bada madaw,waxa uu ahaa turkigu mid ay maa musho dawladii cismaaniyuuntu ilaa 1922 markaas oo la sameeyay dawladan turkiga ee aynu manta naqaano, dawladaas oo uu sameeyay ninkii la odhan jiray Mustafa Kemal Atatürki. Magaca Turkiya waxa uu kasoo jeedaa laba kalmadood oo laysisaaray oo kala ah kalmada Turk oo ah kalmada tilmaamaysa shacab waynaha Turkiga iyo kalmada iye oo ka hadlaysa wexeenaa markaa magacu macna ahaan waxa uu noqonayaa Turkiyadeenii. Wadanka Turkiga intii kahoraysay sanadkii 1922 waxaa maamulaysa Dawlada Cosmaniya. Kadib markii ay bur burtay Dawladii Suluuqiyiinta waxa samaysamay Dawladi Sismaaniyiinta.
Xaquuqda sawirka: Diego Delso
Dynjandi waa biyo-dhac aad u qurux badan kaasi oo ku yaala bariga wadanka Iseland. Biyahani waxay leeyihiin dherer dhan 100 metres (330 ft).
Portal:Yurub/Qof xul ah/3